China Metal Ibé akwụkwọ Manufacturer na Supplier | Amara
SMARTROOF bụ akara zuru ụwa ọnụ, nke na-elekwasị anya na nhọrọ ụlọ elu na ihe owuwu ọhụụ ọhụụ. Ugbu a, anyị na-azụlite ụdị ọhụụ nke ihe eji emepụta ihe eji eme ihe, ma enwere usoro 3 na edemede 3 n'okpuru.
Cool kpaliri Metal Ibé akwụkwọ:
1.Roof Ihe: Na ezigbo mkpuchi mkpuchi na nguzogide kemịkal, Nano Heatproof na Soundproof Metal material, nke ọ bụ ihe eji ọla edo gwakọtara na 8 akwa nke ihe ndị sịntetik. Ọ ga-abụ ihe ọhụrụ ịka nká na nhọrọ ụlọ.
Ihe eji eme Dchọ Mma Dlọ: eji ya mee ihe na ịchọ mma ụlọ dịka ogwe mgbidi, elu ụlọ, arịa ụlọ na wdg, jiri ụkpụrụ na usoro dị iche iche.
3.Household Ọdụdọ ihe: tumadi mee dị ka akụkụ nke ezinụlọ eletriki ngwa dị ka friji, TV, ikuku ọnọdụ na wdg.
Ihe 2abụrụ Ọgbọ
Dabere Raw Akụrụngwa Galvanized Steel / Aluminom
Ihe mkpuchi Nano PET Nkiri
Obosara 0.828M / 0.84M
Ọkpụrụkpụ 0.3MM - 1.5MM
Agba Blue / Red / Silver Grey / Green
Nkwa Afọ 12
01) Kasị na obi ụtọ na-anabata ileta ụlọ ọrụ anyị.
02) A ga-enyocha ngwongwo anyị niile site na QC ma ọ bụ QC gị tupu nnyefe gị.
03) Anyị ahọpụtala mmadụ ka ọ zaa ajụjụ gị n’ime awa iri na abụọ
04) Nnọọ iji nye template maka omenala. OEM & ODM dị
05) Anyị ga-akpakọrịta gị nso, debe gị maka akara niile nke ngwongwo gị
06) Anyị ga-eme ike anyị niile iji nyere gị aka site na ịtụ ịtụ maka mbupu nhazi.
07) Anyị ga-ahụ maka ngwongwo niile anyị zitere gị.
08) Anyị nwere ike ịnye ọnụahịa asọmpi na obi na ọrụ obi maka ndị ahịa anyị
09) Ihe nlere di maka ule gi.
10) Nnyefe oge
11) Na ihe karịrị 10 afọ ogologo mbupụ akụkọ ihe mere eme na ọgaranya exporting ahụmahụ
12) modelsdị dịgasị iche na nkọwa.
13) Ọkachamara ọkachamara. Direct Manufacturers na-eme ka ịchekwa ma kwụsie ike.
Nke gara aga: Metal Roofing Contractors
Osote: Steel Metal Roofing
Metal roofing mpempe akwụkwọ Spainish ụlọ Ngidi
Smartroof Long Life Oge Metal roofing mpempe akwụkwọ Wi ...